Fanohanana sy fanentanana :: Olona sivinjato norosoana sakafo mafana • AoRaha
Nanohy ny tetikasany amin’ny famahanana sakafo mafana ny mponina na ny “Resto du Coeur – Anil Pala”, teny amin’ny fokontany Ilafy, ny Rotary Club Antananarivo Ivandry, tamin’ny sabotsy lasa teo. Olona maherin’ny sivinjato no norosoana sakafo masaka tamin’io.
Ny masoivohon’i Soisa miasa sy monina eto amintsika, Charper Sarott, no nandray anjara tamin’izao fanohanana ara-tsakafo ny mpiara-belona teto Antananarivo izao, taorian’ny an’i Afrika Atsimo, Iran ary Maraoka.
Niara-dalana tamin’ity hetsika ity ny fanentanana an’ireo olona teny an-toerana, izay nisitraka ny sakafo, amin’ny ady atrehantsika amin’ny fanafoanana ny lefakozatra. Mpikambana nanao aron’akanjo mena misy soratra hoe “Toeran’ny Asa izao” (Place à l’action) no nanatanteraka ny fanohanana sy fanentanana. Tanjona ny hanafoana indray miaraka ny hanoanana sy ny lefakozatra, araka ny nambaran’ireo mpanentana.
Efa tamin’ny taona 1985 no nametraka tetikasa “PolioPlus” ny Rotary. Telo taona taorian’io no niarahany niady tamin’ny sampandraharahan’ny firenena mikambana misahana ny reny sy ny zaza (Unicef).
Fitsirihana tampoka :: Fiara an-jatony voasazy tany Avaratry ny Nosy